दिमागलाइ तेजिलाे बनाउनकाे लागी के गर्ने ? केही टिप्सहरू - ज्ञानविज्ञान
दिमागलाइ तेजिलाे बनाउनकाे लागी के गर्ने ? केही टिप्सहरू
दिमागलाइ तिक्ष्ण बनाएर आफ्नाे स्मरणशक्तिलाइ वृद्दि गर्न, दिमागलाइ सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । दिमागलाइ नकारात्मक विचारहरूले भर्दा दिमागकाे शक्ति झन् कमजाेर हुन्छ । त्यसैले सधै सकारात्मक रहनुहाेस् र शारिरीक तथा मानशिक रूपले स्वस्थ बन्रुहाेस् ।
तपाइकाे दिमाग तिक्ष्ण बनाउनकाे लागी केही साधारण टिप्सहरू यसप्रकार रहेका छन्ः
नियमीत व्यायम गर्नुहाेस् । मेडिकल र याेगा गर्नु अझ फाइदाजनक हुन्छ । नियमीत व्यायम गर्नले हाम्राे शरीर फुर्तिलाे हुन्छ र स्यास्थ्यका लागी पनि नियमीत व्यायम गर्नु फाइदाजनक छ । शरीर फुर्तिलाे र स्फुर्त भयाे भने हाम्राे जुन कुरामा पनि मन लाग्ने गर्दछ ।
धेरै चिल्ले र गह्राैँ भाेजन नगर्नुहाेस् । चिल्लाे खानाले हाम्राे शरीरलाइ असर गरिरहेकाे हुन्छ । चिल्लाे खाना खानाले हाम्राे स्वास्थ्यमा खराबी आउँन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म चिल्लाे खाना नखानुहाेस् । धेरै खानाले पनि हाम्राे शरीरमा असर गर्दछ । धेरै खाना खानाले अल्छी लाग्ने, थकित महसुस हुने भएकाले कुनै पनि काम गर्न मन लाग्दैन । यसाे भयाे भने हामीलाइ सफलता हासित गर्न गाह्राे हुन्छ ।
प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुहाेस् । पानी हाम्राे जिवनकाे लागी अति आवश्यक पदार्थ हाे । पानीबिना हामी हाम्राे जिवनकाे कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैनाैँ । पानी हाम्राे शरीरकाे लागी फाइदाजनक छ । धेरै पानी पिउनाले विभिन्र राेगहरूबाट बच्नुका साथै शरीर फुर्तिलाे पनि हुने गर्दछ । त्यसैले पानी पिउनाले दिमाग तिक्ष्ण हुनुका साथै स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने गर्दछ ।
घडी सधै देब्रे हातमा लगाउनुहुन्छ भने, २/३ दिन दाहिने हातमा लगाउनुहाेस् । यसरी साटफेर गरेर घडी लगाउँदा, घडी हेर्ने समयमा तपाइकाे दिमाग सक्रिय बन्छ र स्मरणशक्ति बढ्छ । त्यसैले घडी कहीले एउटा हातमा त कहीले अर्काे हातमा साटफेर गर्दै लगाउने बानी गर्नुहाेस् ।
दाहिने हातले ब्रस गर्नुहुन्छ भने, कहिलेकाहीँ देब्रे हातले पनि गर्नुहाेस् । यसाे गर्दा, दिमाग त्याे काममा केन्द्रित हुन्छ र सक्रिय बन्छ । त्यसैले तपाइकाे सधै एउटै हातले ब्रस गर्ने बानी छ भने त्याे बानी तुरून्तै छाेडेर याे बानी अपनाउनुहाेस् । यसाे गर्दा तपाइकाे दिमाग तिक्ष्ण बनाउन मद्दत पुन्नेछ ।
‘मलाइ सम्झिनै गाह्राे हुन्छ’ भन्रे कुरा दिमागमा ल्याउदै नल्याउनुहाेस् । म सम्झिन सक्छु भनेर सधै सकारात्मक प्रयास गर्नुहाेस् । केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरूमै नकारात्मक कुरा मनमा लिएर त्याे काम सुरू गर्नुभयाे भने तपाइ जिवनमा कहिले पनि सफलताकाे सिखरमा पुग्न सक्नुहुन्न । त्यसैले सधै सकारात्मक साेच राख्ने गर्नुहाेस् ।
केही कुरा पढ्दा या गर्दा, त्यसकाे चित्र आफ्नाे दिमागमा ल्याउनुहाेस् । जस्तै कुकुर भनेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने कुकुरकाे चित्र आफ्नाे दिमागमा ल्याउनुहाेस् । यसाे गर्नाले तपाइ त्याे कुरा हत्तपत्त बिर्सीनु हुन्न । यसाे गर्नाले तपाइकाे दिमाग तिक्ष्ण हुने गर्दछ ।
तपाइ जति खेर पढ्दा पनि के पढ्नु हुन्छ त्याे कुरा लेखेर पढ्ने गर्नुहाेस् । पढ्दै लेख्दै गर्नुभयाे भने तपाइ त्याे कुरा धेरै लामाे समयसम्म भुल्नु हुन्न । पढ्ने राम्राे बानीहरू मध्येकाे सबैभन्दा राम्राे बानी भनेकाे पढ्दै लेख्दै गर्ने बानी पनि हाे ।
आफ्नाे दिमागलाइ एकाेहाेराे पढाइ वा कुनै पनि काममा मात्र नलगाउनुहाेस् । दिमागलाइ घरी घरी फ्रेस बनाउदै पढ्ने गर्नाले पढेकाे कुरा सबै दिमागमा घुस्ने गर्दछ । मनाेरञ्जनात्मक कामहरूकाे लागी पनि केही समय छुट्याउने गर्नुहाेस् । यसाे गर्नाले तपाइकाे दिमाग फ्रेस हुन्छ ।
सम्झेर अभ्यास हप्तामा कम्तिमा ३ पटक, एकपटकमा कम्तिमा ३० देखी ६० मिनेटसम्म गर्नुहाेस् । यसले तपाइकाे दिमागलाइ सक्रिय बनाउँछ । अभ्यास गर्नाले तपाइकाे दिमाग तिक्ष्ण हुन पनि मद्दत गर्दछ ।
तपाइले कुनै पनि कुरा घाेक्नु छ भने त्याे कुरा एकापटक हेर्ने र त्यसलाइ आखाँ बन्द गरेर एकपटक सम्झिने प्रयास गर्नुहाेस् । यसाे गर्नाले तपाइले त्याे कुरा हत्तपत्त बिर्सिन सक्नुहुन्छ ।
निन्द्रासँग सम्झाैँता नगर्नुहाेस् । मस्तसँग निन्द्रापुग्नेगरि सुत्नुहाेस् । नसुती नसुती काम गर्न थाल्नु भयाे भने तपाइ झन् थकित हुनुहुन्छ र फ्रेस हुन पनि पाउनु हुन्न । फ्रेस नभइ कुनै पनि काम गर्न धेरै नै गाह्राे हुन्छ ।
बाेलिरहेकाे मान्छेले भनेकाे कुराकाे अर्थ बुझ्नेगरि गहिरिएर सुन्रुहाेस् । तपाइलाइ कुनै पनि कुरा याद गर्नुछ भने त्याे कुराकाे बारेमा राम्राेसँग बुझ्नु जरूरी हुन्छ । अनि मात्र त्याे कुरा याद हुन्छ । त्यसैले राम्ररी बुझेर सुनेर त्याे कुरा याद गर्ने बानीकाे विकास गर्नुहाेस् ।
विगतकाे दुःख र भविष्यप्रतिकाे डरलाइ दिमागमा नभर्नुहाेस् । विगतका कुरालाइ सम्झेर र भविष्यमा के हाेला भन्रे डरलाइ दिमागमा भर्न थाल्नुभयाे भने तपाइले कहिले पनि केही कुरा याद गर्न सक्नुहुन्न र तपाइकाे दिमाग तिक्ष्ण हुनुकाे साटाे झन् बाेधाे हुँदै जान्छ । आज बाँच्ने र राम्राे गर्ने प्रयास गर्नुहाेस् ।
आफ्नाे काममा सधै आत्मनिर्भर बन्रुहाेस् । यसाे गर्नाले तपाइकाे दिमाग सक्रिय हुन्छ । आफ्नाे जुन काम पनि आत्मनिर्भर भएर गर्ने बानीकाे विकास गर्नुहाेस् । यसले तपाइकाे दिमाग तिक्ष्ण बनाउनकाे लागी धेरै मद्दत गर्दछ ।
नकारात्मक कुराहरू नसाेच्नुहाेस् र मुस्कुराउने गर्नुहाेस् । सकारात्मक साेच र मुस्कानले शरीर तथा दिमागमा स्फुर्तिकाे तरङ्ग ल्याइदिन्छ । नकारात्मक कुरा मात्र साेच्न गर्नाले दिमाग नकारात्मक कुराहरूले मात्र भरिन्छ ।
कुनैपनि निणर्य सही समयमा, सही ढंगले लिनका लागि हामीमा त्यही किसिमको बुद्धि चाहिन्छ । र, बुद्धिको सोझो कनेक्सन दिमागसँग हुन्छ । अब अर्को प्रश्न, दिमाग चाहि कसरी तगडा बनाउने ? यस सन्दर्भमा हिन्दी विविसीको अनलाइन संस्करणमा एउटा लेख प्रकासित छ, जसलाई हामीले यहाँ पेश गरेका छौं ।
हामीलाई सधै एउटा प्रश्नले घेरा हालिरहेको हुन्छ, ‘कसरी सफल हुने ? कसरी प्रगति गर्ने ?’ वास्तवमा कुनैपनि कर्ममा सफलता हासिल गर्नका लागि शारीरिक र मानसिक लगाव, सक्रियता, दृढता, आत्माविश्वास आवश्यक हुन्छ । सही ढंगले तय गरिएको योजनालाई उत्तिकै कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर हामी प्रगतिपथमा लम्कन सक्छौं । अतः यसका लागि हामीसँग उर्जावान्, सक्रिय र तन्दुरुस्त शरीर मात्र होइन, तिक्ष्ण बुद्धी पनि आवश्याक हुन्छ ।
व्यायाम गर्ने बानीकाे विकास गर्नुहाेस्
नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ, स्मरणशक्ति बढ्छ । कसरी ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । जब हामी व्यायाम गर्छौं, दिमागको कोशिकाबीच आपसी सम्पर्क राम्ररी हुन्छ र नयाँ कोशिका पनि निर्माण हुन्छ । कार्डियो एक्सरसाइज अझ राम्रो हो, शरीरमा अक्सिजन प्रवाह हुन्छ । यदि यो व्यायाम तपाईले घर बाहिर गर्नुभयो भने भिटामिन डि पनि प्राप्त हुन्छ ।
छिटाे छिटाे याद गर्ने बानीकाे विकास गर्नुहाेस्
सन्तुलित भोजन खाने गर्नुहाेस्
तपाईं जब चिनीजन्य खानेकुरा सेवन गर्नुहुन्छ, त्यसको २० प्रतिशत हिस्सा सोझै दिमागमा पुग्छ । त्यही कारण हो कि, दिमागको कामकाजी हालत ग्लुकोजको स्तरमा निर्भर रहन्छ । यदि तपाईंले सुगर लेभल नियन्त्रण गर्नुभएन भने तपाईंको दिमाग द्विविधाग्रस्त हुनसक्छ । बरु यस्तो खानेकुरा दिमागको लागि सही हुन्छ, जसले डोपामाइन केमिकल निकाल्छ । यो कुरा पनि ख्याल राखौं कि, दिमागको कोशिका फ्याटबाट बनेको हुन्छ । त्यसैले खानामा बोसोको मात्रा हुनुपर्छ । यसका साथै ओखर, वियाँ, नासपाती, माछा दिमागका लागि एकदमै राम्रो हुन्छ ।
तनाव दिनमागका लागि राम्रो पनि हुन्छ । किनभने आपतकालमा त्यही दिमागले तिब्र रुपमा निर्णय लिन सक्छ । तर, धेरै समय तनावमा रहँदा त्यही दिमागलाई असर गर्छ । साथै कहीले काहीँ दुनियाबाट बेखबर रहनु पनि राम्रो हो । यसले दिमागलाई विश्राम दिन्छ । त्यसबेला दिमागको अर्को हिस्साले काम गर्छ । त्यो हिस्सा, जो सपना देख्दा सक्रिय हुन्छ । स्मरणशक्ति बढाउनका लागि यो अभ्यास निकै प्रभावकारी हुनसक्छ ।
नयाँ चुनौतीको खोजी गर्नुहाेस्
दिमागलाई तन्दुरुस्त राख्नका लागि आवश्यक छ कि, तपाईं त्यसलाई चुनौती दिनुहोस् । यसले तपाईंलाई नयाँ कुरा सिक्न प्रेरित गर्छ ।अर्थात कुनै नयाँ भाषा सिक्ने अभ्यास, कुनै नयाँ कला सिक्ने अभ्यासले पनि दिमागको क्षमता बढाउँछ । यी सबै गर्न पाउनुभएन भने पनि साथी तथा परिवारसँग बसेर अनलाइन गेम खेल्न सक्नुहुनेछ । संगीतले दिमागमा जादुई प्रभाव पार्छ । कुनै गीत सुन्नुहोस्, कुनै वाद्ययन्त्र बजाउनुहोस्, तपाईंलाई महसुष हुनेछ कि, शरीर पुरा सक्रिया भयो । कुनैबेला स्मरणशक्ति कमजोर भएमा गीत संगीतले प्रभावकारी उपचारको काम गर्न सक्छ ।
जब तपाई कुनै नयाँ कुरा पढ्नुहुन्छ, तब तपाईंको दिमागको दुई कोशिकाको तार जोडिन्छ । जब तपाईं सुत्नुहुन्छ, जुन यो सम्पर्क बलियो हुन्छ । तपाईंले पढ्नुभएको कुरा मस्तिष्कमा रहन्छ । यो कुनैपनि कुरा स्मरणमा राख्ने राम्रो काइदा हो । त्यही कारण त हो नि, सुत्नुअघि फिल्म वा डरलाग्दो कथा सुन्नु राम्रो होइन । यसले तपाईंको मास्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
तपाईंलाई थाहा छ कि, निद्रा एकदमै महत्वपूर्ण छ । यदि तपाईं दिनमा पाँच घण्टा सुत्नुहुन्छ भने मानसिक रुपले त्यती सर्तक हुन सक्नुहुन्न । यो स्थिती त्यसबेला पनि हुन्छ, जब तपाई १० घण्टाभन्दा बढी सुत्नुहुन्छ । यसको अर्थ के भने, तपाईं कति समय सुत्नुहुन्छ वा कतिबेला उठ्नुहुन्छ ? यसको साइनो स्मरण क्षमतासँग पनि जोडिएको छ । सबैभन्दा राम्रो स्थिती त यो हो कि, तपाईं अध्याँरोमा सुत्नुहोस् र क्रमस उज्यालो छाउन थालेपछि उठ्नुहोस् । जस्तो कि, सूर्यको किरण । उदाउदो घामको किरणको स्पर्शले पनि स्मरणशक्ति बढाउनमा निकै फाइदा गर्छ ।
Don't Miss it सम्पति नभएर गरिब भइदैन, भएको सम्पति नचिनेर गरिब भइन्छ – कथा र भिडियो सहित
Up Next कसरी बढाउन सकिन्छ आत्मविश्वास ? जान्रुहाेस्
राेगहरु समाधान गर्न सकिने योगा र मेडिटेसनका केही यस्ता अदभुत फाइदाको बारेमा जानिराखाै
दैनिक दुई घण्टा उभिनु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने एक अध्यनले बताएको छ । घर तथा कार्यालयहरुमा लामो समय…
7 days ago biplov
धनी बन्नका लागी रतन टाटाले दिएका १० प्रभावकारी टिप्स
रतन नवल टाटालाइ नचिन्ने मान्छे कम नै होलान । आज हामी उनले सफल हुनका लागि दिएका १० प्रभावकारी टिप्सबारे हामी…
जीवनमा आएका चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने ?
जीवनमा हरेक कोहि व्यक्ति सफलता चाहन्छ । किनकि यो उरा उसलाई राम्ररी थाहा छ कि, यदि सहि तरिकाले बाच्नु छ…
अब गर्मीमा आँखाको हेरचाह कसरी गर्ने ?
आँखा हाम्रो शरीरको संबेदनशील अङ्ग मध्ये एक हो । जसलाई हामीले अत्याधिक ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । वायुमण्डलमा बढ्दै गएको…
शक्तिशाली छिमेकीबाट टाढै रहनुहोस् – प्रेरक प्रसंग
झन् झन् पछी पर्छन्, सधै अरुको नजरमा झुक्नुपर्छ जो सानो-सानो कुराका लागी पनि अरुलाई सहयोग माग्ने गर्दछन । अब नझुक्नुहोस,…
यस्ता छन् ल्वाङ खानुका फाइदै फाइदा, जान्नुहाेस्
ल्वाङ कसरी प्रयोग गर्ने ? र कती मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यौल सबैलाई हुन्छ । कतीपय अवस्थामा ल्वाङ सेवन आवस्यकता…
याद गर्नुहाेस् ! कति हानिकारक छ घुर्ने समस्या ? यस्ता छन् यसलाइ समाधान गर्ने उपाय
पत्यार नलाग्न सक्छ, तर घुर्ने समस्याले दम्पतीबीच फाटो समेत ल्याउने गरेका छन् । केही घटना यस्ता छन्, घुरेकै कारण दम्पतीको…
कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउने गर्नु हुन्छ ? पिएकाे एक घन्टा पछि शरिरमा के हुन्छ ? जान्नुहाेस्
गर्मी बढ्दैछ, त्योसंगै बजारहरुमा चिसो पेय पदार्थको बिक्रि बढ्दो छ। तर के यस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्स स्वास्थ्यको लागि फाइदजनक छन् ?…
यस्ता छन् मह र लसुन मिसाएर खानुका चमत्कारीक फाइदै फाइदा
लसुन र मह (हनी)को बारेमा जानकारी नहुने सायदै होलान्। हरेक दिन हाम्रो भान्सामा लसुन मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ। लसुन मसलामात्रै…
जाडो मौसममा छाला र ओठ फुट्ने समस्या कसरी ठिक पार्ने ? केहि सजिला उपायहरु
सामान्यतः छालालाई ‘ड्राई’, ‘नर्मल’ र ‘ओइली’ गरी तीन प्रकारका हुन्छन्। तर जाडोमा भने ड्राई प्रकृतिका मात्र हैन सबैखाले छाला सुख्खा…
बच्चालाई भातको माड खुवाउँदा अनेकौ फाइदा
बालबालिकाले भातको माड सजिलै पचाउन पनि सक्छन् र माडले शरीरलाई ऊर्जा पनि दिन्छ। यदि बच्चा अलि गिलो खानेकुरा खान तयार…
आफूमा सकारात्मक परिवर्तन यसरी ल्यानुहाेस्
बदलिँदाे परिवेशमा विकासका लागि समय सापेक्ष रूपमा आफूमा पनि सकारात्मक परिवर्तन गर्नु जरूरी हन्छ । हाम्राे सफलतामा हाम्राे व्यक्तित्वकाे विकासमा…
याद गर्नुहाेस् ! मुटुका लागि खतरा हुनसक्छ अति धेरै खुशी हुनु पनि
खुशी हुनु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हो । तर अति धेरै खुसी हुनु मुटुको लागि भने खतरा हुने स्वस्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका…
कला मनोरञ्जन (2)
घरेलु उपचार (55)
भान्छामा औषधी (34)
व्यक्तित्व विकास (26)